"Nido de L'Aquila" indlu ezimele - I-Airbnb
"Nido de L'Aquila" indlu ezimele
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Gianfranco
Indlu izungezwe okuluhlaza, ezimele futhi inendawo yangaphandle evalekile futhi efanele izingane nezilwane ezifuywayo. Kunekhishi elikhulu, igumbi lokuphumula negumbi lokuphumula esitezi esiphansi, amakamelo okulala angu-3 anemibhede engu-6 esitezi esiphezulu, izindawo zomlilo ezingu-2 ezingasetshenziswa.
Ungathatha uhambo oluya e-Gran Sasso (imoto ehamba ngogesi imizuzu engu-15 ngemoto) noma e-L 'Aquila (imizuzu engu-10 ngemoto). Indawo egcwele izigodlo, amasonto amadala nemizana emincane. Uma unesifiso, sizokunikeza zonke izinkombandlela.
Igalaji lezimoto, izithuthuthu noma amabhayisekili ayatholakala.
Njengoba kucatshangelwa indawo engaphandle kwedolobhana lase-Tempèra, iphinde ilungele abathandi bokuqwala izintaba, ukuhamba ngebhayisikili kanye nemvelo ngokujwayelekile.
Indawo enkulu yangaphandle ivumela ukuphumula, indawo yokudlala yezingane kanye nekhono lokuhlanganyela iholide nabangane abanemilenze emine njalo basamukela futhi abazoba nayo yonke indawo yangaphandle evalekile etholakalayo yokuhlala ngaphandle ngokunethezeka.
Ayikho i-TV ukuze ividiyo egumbini lokuphumula itholakalela kuphela ama-DVD noma amabhokisi (amanye asesayithini).